नेपाली – बाह्रथरी कुरा
बाह्र सत्ताईस कुरा (78)
मन खोली… खेलौं होली ! – बाह्रथरी कुरा मा मन्नपका होली टोली
Ramesh मा जहाँ पुग्दैनन कवि, त्यहाँ पुग्छन् रवी
Ramesh Bhandari मा सेक्सुअल ह्यारेस्मेन्ट – अपराधी व्यक्ति कि पेशाकर्मी सबै?
Ramesh Bhandari मा ओच्छयान मुतुवाको आत्मकथा
Narayani Ghimire मा साहित्यमा हग्ने र मुत्ने कथा, किताब बिकेनन् भन्दै प्रकाशकको रोइलो
संग्रहहरु महिना छान्नुहोस् मार्च 2020 अगस्ट 2019 जुलाई 2019 जुन 2019 मे 2019 अप्रील 2019 डिसेम्बर 2018 नोभेम्बर 2018 सेप्टेम्बर 2018 अप्रील 2018 फ्रेवुअरी 2018 डिसेम्बर 2017 सेप्टेम्बर 2017 अगस्ट 2017 जुलाई 2017 मे 2017 अप्रील 2017 मार्च 2017 फ्रेवुअरी 2017 जनवरी 2017 नोभेम्बर 2016 अक्टोबर 2016 सेप्टेम्बर 2016 अगस्ट 2016 जुलाई 2016 जुन 2016 मे 2016 अप्रील 2016 मार्च 2016 फ्रेवुअरी 2016
आकिस्मेटले0स्पाम रोकेको छ
यो हप्ता फ्लाई दुबईले नेपाली हवाइयात्रुमाथि गरेको भेदभावका ’boutमा प्रकाशित ब्लगले धेरै नेपालीले हेपिएको महसुस गरे। एउटा एअरलाइन्सले एउटै जहाजमा लाग्दो पैसा तिरेर यात्रा गर्दा यात्रुको देशकै आधारमा भेदभाव गरिनु निश्चय पनि राम्रो हैन। यो सरासर हेपेको हो भन्नलाई कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन। तर यसै मेसोमा हामीले हाम्रा नियति, हाम्रा व्यवहार, हाम्रो देशको आर्थिकदेखि राजनैतिक हैसियत, हाम्रा आनिबानीका ’bout पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ। अर्को एअरलाइन्सले भेदभाव गर्‍यो भनिरहँदा हाम्रो अध्यागमन, एअरपोर्ट, हाम्रो एअरपोर्टमा रहेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीका ’bout पनि चर्चा गर्नुपर्ला। यो लेख १२ थरीको सँधैकोभन्दा फरक किसिमको पर्न गएमा १२ थरी परिवार माफी चाहान्छ 😋 पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
Posted on अप्रील 11, 2017 by Golf	0
खैर !!! केही समय पहिले ट्रम्प हिलारी र भुँइफुट्टा नेपाली भनेर हामीले वा मैले जस्ले लेखे पनि यहाँ छापिसकेका छौँ। हिलारीको पक्षमा पाखुरा सुर्केर लागेका नेपालीको हालत त रुझेको बिरालो जस्तो भाको तथ्य घाम झैं छर्लङ्ग छँदैछ । कसैलाई नलाको राजनीति नेपालीलाई लाग्ने हेर्नुस न । उहि क्या त…. केहि थान नेपाली र अमेरिकी-नेपाली पत्रकारहरुले चुनाव अघि नै ‘आगामी राष्ट्रपति हिलारी बस्ने घर’ भनेर ह्राइटहाउस अघि फोटो खिचाएर तहल्का मच्चाएको बिर्सनु भो ? त्यो फोटो हालेको एक साता नबित्दै हो कि क्या हो हिलारीको के के भो भन्ने त जगजाहेरै छ। भनेसी बुझ्नु भो भो नि…. नेपालीको जातले कतिसम्म पनौती लगाउन सक्ने रहेछन भनेर। अब तिनै पत्रकारहरु ट्रम्पलाई हटाउन मरिहत्ते गरेर लागेको देख्दा अर्को कार्यकाल नि ट्रम्पले नै लैजान्छन् कि जास्तो लाग्ने के 😂 पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →
Posted on फ्रेवुअरी 17, 2017 by Charlie	1